Date My Pet » 5 Unique yechirimo Date Ideas
Last updated: Jul. 11 2020 | 2 Maminitsi verenga
Yechirimo ndiyo nguva yakakwana yokuti kava shure uye vachinakidzwa nguva neshamwari uye nemhuri zvakafanana. Ndiyo uyewo nguva yakakwana kuwana kunakidzwa zvimwe mafaro, kwete yako run-of-the-chigayo mazuva. Ongorora zvinhu zvishanu rakasiyana yechirimo musi pfungwa dziri chokwadi kuti vangova nendangariro makuru refu pashure kutonhorwa ati regwede.
Canoeing Adventures: Kana pane rwizi kana dhamu guru pane imwe nzvimbo mukati kutyaira kure, pane mukana yakanaka kuti kunewo ruvara chipiriso igwa (kana Kayak) Rentals. Vakawanda mabhizimisi aya pachena chete mumwedzi yezhizha, saka kuva nechokwadi kuti bhuku uchinzvera wako pachine nguva kuti haunganyadziswi kutendera pasi rokuva vasvika kuti nzvimbo chete kuwana zvose zvikepe iripo kare zvazvakaipira nokuti zuva. Kazhinji nzvimbo kufanana Groupon vane pagondobwe Rentals zvakadaro, saka mari kuburikidza kushandisa imwe inopa izvi zvinogona kuva mukana. Takurai kupikiniki kwemasikati dzisapinda midziyo kuchengeta zvose iwe zuva zvakanaka zvokudya panguva ushingi yako.
Frisbee kana Mini Golf Matambudziko: Tisangosiya rima Bowling mukoto mumwedzi chirimo uye sarudza chimwe izvi zvinonakidza golfing zvaungasarudza pachinzvimbo. Nepo Mini gorofu ruchigona kuva "njodzi" sarudzo nokuti munhu asina chokwadi chake / mitambo mano ake, zvikuru zvemitambo vachida kuti kuda kutora mukana uye tarisa yomunzvimbo Frisbee gorofu kosi. Kwete chete ndivo vaviri mabasa aya wakakwana pakuchengeta netsa Anonyaradza panguva Bay, asi vari uyewo zvikuru nzira kuwana zvishoma pedyo Zuva sezvo imi kuvabatsira edza vakakwana Kuisa / vachikanda chimiro. Kupedzisa kure musi wako rwendo yomunzvimbo chando cône shack-rimwe bhizimisi yemanyorero akazaruka chete panguva yechirimo.
Dog Park Dates: Kana mose iwe musi tiri farira vanoda imbwa, hapana chikonzero kusiya shamwari dzako canine shure sezvo imi musoro ive manheru kunofara. Nepo zviri zvakajairika kuti kuvharwa mumwedzi yechando, vakawanda imbwa mumapaki dzomunharaunda anosvinurira muzhizha. kana zvichiita, kuva nechokwadi kuti kuverenga paIndaneti wongororo uye kutsvakurudza chero dzakananga mitemo chaiyo imbwa mumapaki asati kuunza imbwa yenyu uye musi kwavari. Kana pasina imbwa mumapaki sevasina akazaruka kwaunogara, kusarudza kuronga imbwa-vachifamba kwokuwirirana yako inokosha nevamwe rinogonawo kuva kunonakidza kumwe nezvechisarudzo pachinzvimbo. Chenjerai kuti vauye pamwe kumwe mvura kuchengeta wose wakasununguka inotonhora uye hydrated panguva iwe zuva.
Outdoor Theater manheru: Kushandisa inodziya manheru uye kudzidza zvishoma zvakawanda pamusoro omunharaunda Arts ako Chiitiko. Maguta akawanda kupa pachena kana kuderedzwa mitengo nokuda matikiti nokuda Outdoor mitambo zviitiko, pamwe zvesimba kubvira musicals kuti Shakespearean mitambo kuti Choir Concerts. zvisungo Local vanonziwo kazhinji kuita anoratidza panguva dzakasiyana-siyana Outdoor munzvimbo mumwedzi yezhizha uyewo. Kana pasina panze Performing Arts zvaungasarudza sevasina iripo munzvimbo yako, funga makatarira chero nemotokari-muna kufirimu dzemitambo pachinzvimbo; kunyange anenge sezvinoitwa mhenyu unongotaura, kutyaira-mune dzemitambo vachiri vane imwe isingachinji unhu kwavari.
Geocaching: Nepo izvi zvazviri haisi chiitwa izvi zvinongobva kungogumira mwedzi yezhizha, nani mukana okunze nani zvechokwadi hazvizorwadzisi mukana wako wokuva mafaro munguva geocaching zuva. Kwereta GPS rinoronga ezvinhu kubva shamwari kana kushandisa smartphone yako kubatsira pakutsvaka kwako, uye kutsvakurudza geocaches veko vasati kutangira pamusoro zuva rako. Iva nechokwadi kuti kuuyawo pamwe kunonakidza chinhu yako zuva kusiya vari cache!
Kushamisira With Your Dating Online Profile Photo